I-verizon ngoku ikhupha i-Android 6.0.1 marshmallow ye-galaxy s6 kunye ne-s6
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Verizon ngoku ikhupha i-Android 6.0.1 Marshmallow ye-Galaxy S6 kunye ne-S6
Nangona i-Samsung izise intabalala ngendlela yokuphucula entsha Galaxy S7 duo , kunyaka ophelileyo & apos; I-Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge ayizilibaleki kwaphela. Ngapha koko, i-Android Marshmallow yamva nje ikhutshelwe kuhlelo oluninzi lweziphatho ezibini kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, kutshanje I-Sprint Galaxy S6 . Kunye I-T-Mobile isavavanya Uhlaziyo lweemodeli zombini, uVerizon ngoku ujoyine ipati, sele eqalile ukubonelela ngeGalaxy S6 kunye nabanini be-S6 ngohlaziyo ekudala lulindelwe lwe-OTA.
Njengoko sele kukhankanyiwe ngaphambili, isoftware ibikhona kwindawo esemthethweni kangangexesha elithile. Kodwa njengoko kunjalo, ithatha ixesha ukufikelela kubasebenzisi abathile, kuba abathwali bathanda ukongeza ezabo izinto zokugqibela ngaphambi kokukhupha uhlaziyo olukhulu.
I-Android 6.0.1 Marshmallow ye-Galaxy S6 kunye ne-S6 edge ibandakanya zonke izinto ozithandayo kunye neapos; ngokuqinisekileyo uya kube uqhelene ngoku, kubandakanya uGoogle ngoku kwiTephu, ipaneli entsha yokwazisa kunye Shumi elinambini , ekufuneka ikuncede ngcono ukugcina la matontsi axabisekileyo ebhetri. Kuba yi-Android 6.0.1 & apos, ufumana kwakhona uhlaziyo lokhuseleko luka-Matshi.
Ukuba uyenzeka ukuba ungumnini we-S6 okanye i-S6 kumda weVerizon, ngekhe usifumane isaziso se-OTA kwangoko. Njengakuqala, uhlaziyo luyatyhalelwa ngaphandle kumaza, kungathabatha iiyure ezimbalwa okanye neentsuku zokugqibela ukubetha i-handset.
Njengoko ulindile, nantsi iapos ujonge ezinye izikrini esizithathileyo xa eyethu i-Galaxy S6 ihlaziywa kwiLollipop:
I-Android Lollipop (ngasekhohlo) ngokuthelekisa iMarshmallow kwiGPS S6
I-iphone 12 pro max isivamvo esecaleni
Imowudi emnyama vs imowudi elula
Uluhlu lweSamsung ye-Samsung S yendaleko
Umdlalo weZihlalo zobukhosi Ngaphandle koDonga ukuze usungule njenge-iOS eyodwa
I-Apple iPhone 7 Plus 'zoom zoom vs iPhone 7 & apos; zoom yedijithali: nantsi iiapos; kutheni i-Optical ihlala iphakeme
I-HTC One M9 iqala ukufumana uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat kwi-AT & T.
IJava-Uyifunda njani ifayile yeJSON njengeString